Fizahantany : nanafoana ny famandrihany ny 20%-n’ny vahiny | NewsMada
Fizahantany : nanafoana ny famandrihany ny 20%-n’ny vahiny
Maro ny ezaka atao hampiroboroboana ny fizahantany eto amintsika, fa tsy mety tafarina. Mametraka ny ahiahiny ireo matihanina satria efa mihena sahady ny famandrihan’ireo vahiny saika hitsidika an’i Madagasikara.
Manaitra ny fanjakana handray fepetra haingana ny matihanina amin’ny fizahantany, mivondrona ao anatin’ny Fiombonan’ny federasion’ny fizahantany eto Madagasikara (CTM). Ivondronan’ny mpisehatra amin’ny fizahantany valo ity fikambanana ity, toy ny mpandraharaha amin’ny trano fiantranoana, fisakafoana, ny mpikarakara ny dian’ny mpizahatany, ny mpitatitra, sns. Nomarihin’izy ireo fa manodidina ny 20% ny vahiny mpizahatany nanafoana ny famandrihany tokony ho avy aty Madagasikara tato anatin’ny telo volana voalohany tamin’ity taona 2018 ity, ka lasa niova firenen-kafa hotsidihana.
Nambaran’ny CTM fa maromaro ny antony nampihemotra azy ireo. Miahiahy ny vahiny amin’ity fahatapahan-dalana amin’ny lalam-pirenena tena falehan’ny mpizahatany, indrindra ny RN 2 sy ny RN 7, simban’ny rivodoza Eliakim farany teo. Eo koa ny fanafoanan’ny Air Madagascar ny zotra anatiny, na tsy mari-potoana fa mihemotra lava. Manampy izany ny aretina pesta nandalo teto Madagasikara ny taona 2017. Ary tena iraisan’ny CTM feo amin’ny mpandraharaha hafa ny tsy fandriampahalemana tsy vitan’ny fitondrana mihitsy ny mamaha azy, tsy ahitam-bokatra azo tsapain-tanana.
Tsy ho tratra ny tanjona mpizahatany 500.000
Nambaran’ny filohan’ny CTM, Patrice Raoull fa raha raisina amin’io 20%-n’ny vahiny nanafoana ny famandrihany ho aty Madagasikara io, tsy ho tratra mihitsy ny tanjona hahatongavan’ny mpizahatany 500.000 amin’ny taona 2020.
Midika ireo fa sarotra ny hoavin’ny fizahantany eto amintsika, efa potika hatramin’ny krizy politika 2009. Eo rahateo ny tsy fahatoniana amin’ny politika, sady fotoam-pifidianana rahateo ity taona 2018 ity.